China Umdlandla kunye noMoya oThengisa izixhobo zeFektri, ukuPhefumla kunye noMthengisi oThengisa izixhobo
Flour mill pulse jet filter isetyenziswa ngokubanzi kwimizi-mveliso yokutya, okusanhlamvu kunye nokutya. Isetyenziswe nakwimizi-mveliso yeMichiza, yezoNyango kunye namanye amashishini.
Umatshini wokutshintsha umbandela wokuhambisa ulwalathiso kwinkqubo yokuhambisa umoya.
Iivensi kunye nesilinganisi senziwe njengesiqwenga esifanelekileyo. Iingcambu blower zinobomi obude benkonzo kwaye zinokuqhuba ngokuqhubekayo.
Njenge-PD (ukubhabha okuhle) blower, iza nomthamo wokusetyenziswa kwevolumu ephezulu kunye nokusebenza ngokukuko kwevolumu ephezulu.
Njengomatshini osebenza kakuhle wokuphefumla ngombane, ifeni yethu ye-centrifugal iye yavavanywa ngokungqongqo kuvavanyo lokulinganisa. Iqukethe ingxolo yokusebenza ephantsi kunye nokugcinwa okulula. Ukusebenza ngokukuko kunye nenqanaba elithile lesandi esine-A zombini ukuya kuthi ga kwinqanaba leBakala A elilawulwa yimigangatho yesizwe yaseTshayina ehambelana nayo.
Uxinzelelo olubi lwe-Airlock
Uyilo oluphambili kunye nokuyila okuhle kwesi sitshixo somoya kuqinisekisile ukuba umoya uyaqina ngokwaneleyo ngelixa ivili elijikelezayo lihamba kakuhle.
Iglasi yokubona iyafumaneka kwindawo yokungena koxinzelelo lwe-airlock yovavanyo oluthe ngqo.
Izinto eziphathekayo zingena kwi-inlet ephezulu, kwaye zidlula kwi-impeller, kwaye zikhutshwe kwi-outlet engezantsi. Ngokwesiqhelo kufanelekile ukondla izinto kumbhobho woxinzelelo olungileyo, i-airlock yoxinzelelo inokufumaneka kumzi-mveliso womgubo.
Imibhobho ye-Pneumatic yoMgaqo we-Flour Mill: -Uxinzelelo oluphezulu lokubonelela ngombane lubonelela ngamandla okuphakamisa zonke iintlobo zezinto eziphakathi ezisuka kwimizi yokugaya, izinto zokucoca okanye zokugqiba amabhontsi ukuya kwizicwangciso zokuhluza ngakumbi nokuhlela. Izinto zihanjiswa kwimibhobho yomoya. Iimpawu: -Yenzelwe ngokungqinelana nokubala ngqo; Ukuyila okugqwesileyo. -Yenziwe ngentsimbi ebandayo eqengqelekayo apho ubukhulu bayo bususela kwi-1.5mm ukuya kwi-2.5mm. - Amandla agqityiweyo, ngaphakathi eprintwe nge-varnish yokutya. - Nge ...